Famaranana mahatsiravina any Afghanistan miaraka amin'i Kabul voahodidin'ny Taliban
Home » Lahatsoratra farany farany » Airport » Famaranana mahatsiravina any Afghanistan miaraka amin'i Kabul voahodidin'ny Taliban
Vaovao Mafana Afghanistan • Airport • Aviation • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovaom-panjakana • Vaovao • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Ny filoha afgana dia mifampiraharaha momba ny fitrandrahana am-pilaminana an'i Taliban
Fiaramanidina Air India dia tonga ao amin'ny seranam-piaramanidina Iraisampirenena Kabul ho fiezahana hanampy ny olom-pirenenan'izy ireo Indiana handositra ny fampihorohoroan'ny Taliban. Eo amin'ny tany ny fiaramanidina. Raha afaka miainga indray dia efa misokatra.
Tapitra ny Tt. Tonga tamin'ny famaranana lojika ny fifampiraharahana. Ny tetezamita fahefana tsy misy rà dia mandeha amin'ny fametrahana efa misy.
Vaovao sy horohoro ary korontana bebe kokoa no tonga avy any Afghanistan amin'ny faharoa.
Hiaro sy hibaiko ny seranam-piaramanidin'i Kabul, araka ny lazain'ny governemanta Tiorka sa avelan'izy ireo ho an'ny Taliban ??
Ny Taliban sy ny governemanta Afghan dia eo am-panaovana resaka momba ny 'tetezamita am-pilaminana', hoy ny tatitra nataon'ny masoivohom-baovao
Tsindrio eto raha hovakiana ny fiafaran'ity Alahady feno fisehoan-javatra ity tamin'ny alàlan'ny Taliban Fighters naka an'i Kabul sy ny lapan'ny filoha Afghanistan
eTurboNews dia mandefa famintinana ireo vaovao sy lahatsoratra media sosialy tao anatin'ny 30 minitra farany. Ny lahatsoratra dia tsy nasiam-panitsiana ary nandoko sary mahatsiravina momba ny zava-miseho any Afghanistan amin'izao fotoana izao.
Kabul miaraka amin'ny sisa any Afghanistan dia vinavinaina ho potraka anio amin'ny alahady 15 aogositra 2021
Koa satria ny Etazonia sy ny OTAN dia miala lavitra any Afghanistan, dia azon'ny tafika Taliban mora foana ny mitana an'i Afghanistan iray manontolo. Aiza ny ONU? Misy ve izy ireo?
Ny zavatra hitako teny amin'ny manodidina ny tanànan'i Kabul: ny tabataba be dia be dia be vokatry ny fiasan'ny olona amin'ny fiara mifono vy, ny hafainganam-pandehan'izy ireo, eny fa na ny mpiambina aza mitifitra eny amin'ny boriborintany mba hamafana ny fitohanan'ny fifamoivoizana. Amin'ity fotoana ity dia tsy misy famantarana ny Taliban ao an-tanàna. Taliban dia nilaza fa tsy hiditra.
Mpitolona taliban niankohoka teo anatrehan'i Allah Tsitoha (swt) haneho fankasitrahana / fisaorana ao Kabul. #Cabul #KabulHasFallen #Taliban pic.twitter.com/wmSCgXXnX2
- Syed Wasif Ali (@SyedWaasifAli) Aogositra 15, 2021
“Tsy manisa izahay satria avy any Afghanistan. Ho faty miadana amin'ny tantara isika ”. Ranomaso zazavavy Afgana tsy manam-panantenana izay potipotika ny hoaviny rehefa mandroso ny Taliban ao amin'ny firenena. Torotoro ny foko ho an'ireo vehivavy ao Afghanistan. Tsy nahomby azy ireo izao tontolo izao. Hanoratra an'io ny tantara.
Miaramila amerikana miisa 5000 no nalefa tany amin'ny toerana mafana, ny sasany efa tany Koety ary navoaka tamin'ny toerana fialana hafa ary nalefa niverina hiaro. Kabul etc.
Vonona ny hanaiky ny Taliban ho governemanta i Shina Afghanistan.
Taliban tao Kabul dia nandà ny tatitra momba ny fampahalalam-baovao momba an'i Mullah Baradar Akhund ho avy handray fahefana Kabul.
Enga anie ka hanokatra ny seranam-piaramanidina Kabul indray izy ireo atsy ho atsy. Kabul dia seranam-piaramanidina feno habibiana hidina ary hiainga avy (mafana, avo, be tendrombohitra), ho tonga mavesatra ny fiaramanidina satria tsy azo antoka ny famenoana solika, ho be loatra ny asa sy ny saina ny ATC noho ny sidina fanampiny. Tena kely ny sisin'ny fiarovana.
Vaovao mivaingana Kabul nanodidina ny US Chinooks namindra toerana ny olona rehefa miteny izahay.
Ny mpandoa hetra amerikanina dia nandatsaka an-tapitrisany tapitrisa tapitrisa tapitrisa tapitrisa tapitrisa tapitrisa tapitrisa tapitrisa tapitrisa lily tao anatin'ny ady Afghanistan fotsiny mba hialana sasatra ao anatin'ny roa volana aorian'ny nandaozanay ny tafika.
Ary farany #Cabul miverina amin'ny tena tompony. Allah no Al-Haq
Ny fanamby tokana ho an'i Taliban dia ny famaritana ny ambaratonga ambany indrindra aminy, rehefa tonga teo amin'ny fitondrana izy ireo. Taliban dia naneho izany imbetsaka, fa amin'ny fotoam-pilaminana, ity fitsipi-pifehezana ity dia hanana fientanam-po marobe - tsy ny hisintona fotsiny na ny tsy hisarika ny saika.
Ireo olona izay mendrika ny hitondra dia maka izay azy ireo. USA, INDIA, ISRAEL akaiky anao koa ny fianjeranao!
Raha ny tatitra voaray dia vonona ny handositra an'i Afghanistan ny filoha Afgana Ashraf Ghani۔
Ireo mpiady taliban dia "mandeha isam-baravarana" hamory tovovavy ho "andevon'ny firaisana" amin'ireo mpiady ao amin'ny vondrona mpampihorohoro, hoy ny tatitra.
Oay! Tom Tugenhadt dia nilaza fa nanao antso avo amin'ireo mpiara-dia aminay andrefana & UE ny UK mba hanohanana fanampiana fanampiny ao Afghanistan taorian'ny fisintomana an-dry Biden, tsy nisy niakatra: aiza ny lohateny !!!!
Tsotra ny hafatra avy amin'ny Etiopiana- Isika, amin'ny maha firenena, dia tsy teraka omaly. Tsy te ho Libya hafa izahay, Yemen na Afghanistan. Ny fidirana an-tsehatra amin'ny maha-olona dia lavitra ny lazainao azy ireo.
Loharanom-baovao iray ao anatiny no milaza fa manandrana maka an-keriny sy manambady vehivavy an-keriny ny mpitondra taliban taorian'ny nanontanian'ny mpitondra teo an-toerana tany Afghanistan hanolotra ny lisitr'ireo 12 ka hatramin'ny 45 volana lasa.
#Taliban Afaka miaro tena amin'ny herisetra mandritra io fotoana voafaritra io, azo antenaina ny fahafaha-manao bebe kokoa rehefa mitaky ny maha ara-dalàna ny sehatra iraisampirenena izy ireo amin'ny fananganana governemanta vaovao maharitra.
Afghanistan: Taliban niditra tany ivelan'ny tanànan'i Kabul - araka ny fampanantenan'ny governemanta Afgana ny fifandimbiasam-pahefana milamina | Vaovao Eran-tany | Sky News
Mahafinaritra ny mahafantatra an'io Kabul nianjera, nirehitra ny masoivohonay, ary mila angidimby hialana amin'ny firenentsika.
Fiantsonana Air India any Kabul hamindra toerana ireo teratany karana. Hahavita izany ve izy ireo?
Tokony hametra-pialana anio ny filoha Ghani. Mulla Abdul Ghani Baradar, mpitarika Taliban ary minisitry ny raharaham-bahiny taloha an'ny Emirates Islamika, handray ny andraikiny amin'ny maha filoha vonjimaika ny #Afganistan ao amin'ny lapan'ny filoham-pirenena, #Kabul.
Misy loharanom-baovao sasany milaza fa tsy hanafika an'i Kabul ny Taliban, satria eo am-panatanterahana ny tetezamita ny governemanta. #AfghanistanBurning
Air India A320. Midina amin'ny #Cabul
Andro vitsy taorian'i Etazonia dia naminavina ny fianjeran'ny Kabul ao anatin'ny 90 andro. Tsy afaka nanohitra nandritra ny 90 ora akory io tafika Rangeela Ghani io.
Governemanta Afghana, vava be fa tsy misy herimpo sy fahamendrehana. Raha tokony hiady ho an'ny tanindrazany izy ireo dia mihazakazaka mitady fialokalofana Ny tena izy dia tsy tanindrazany velively, fa ny governemanta dia noforonin'i Etazonia, fa tsy governemanta Afgan tena izy.
Niditra tao an-tsisin'i Kabul renivohitra Afghanistan ireo mpitolona taliban taorian'ny nisamborana ny tanànan'i Jalalabad tsy nisy ady, hoy ny tompon'andraikitra ao amin'ny firenena.
Seho miavaka amin'ny @AJEnglish.
Ny angidimby mandeha mivantana dia avy sy mivoaka # US Masoivoho.
Fahalavoan'ny #Cabul mety hitranga izao. Tatitra marobe #Taliban singa ao an-tanàna, saingy koa ny fitarihana teny dia nandidy ny mpiady hijanona eo amin'ny sisintanin'ny tanàna.#Afghanistan pic.twitter.com/oLFUvhKek8
- Norman Hermant (@NormanHermant) Aogositra 15, 2021
Amerika no ho voalohany raha tsy Pakistan sy Shina hanaiky ny governemanta Taliban. Ny fiarahamonina anjakan'ny lehilahy dia nitana andraikitra lehibe hamela ny Taliban haka an'i Afghanistan tsy misy ady. Aza mino mihitsy izay lazainy sy ny fihetsiny. Ny shariya ao Kabul now!
Taliban dia lavitra iray hisambotra an'i Afghanistan
RIP Miaramila Afghana !! Andriamanitra hamonjy ny olom-pirenena tsy manan-tsiny